Donald Hilton သည် Nicole Prause အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှု - အခြား Prause သားကောင်များ၏ ၉ ခု၏ဟီလ်တန်တရားစွဲဆိုမှု၊ ပြပွဲများနှင့်ကျမ်းကျိန်လွှာများကူးယူထားသော - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
နီကိုးလ် Prause ဆန့်ကျင် Donald ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု: Download လုပ်နိုင် PDF ကိုဟီလ်တန်တရားစွဲဆိုမှုများရဲ့ပြပွဲနှင့်9သည်အခြား Prause သားကောင်များအားဖြင့်ကျမ်းကျိန်လွှာ
မေ 8, 2019 - Hilton မှကန ဦး 17-စာမျက်နှာတိုင်ကြားချက် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရွေးချယ်ထားသောပုံများ) နီကိုးလ် R ကို Prause ဆန့်ကျင် Donald ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု (နောက်ပိုင်း ဖက်ဒရယ်တရားရုံးသို့ပြောင်းရွှေ့နှင့်ပြင်ဆင်) ။ တရားရုံးက FILE ဒီမှာပါ.
ပြကွက် B ကို
ပြကွက် E ကို
ဇူလိုင်လ 24 တွင်, 2019 ဒွန်ဟီလ်တန်တို့ပါဝင်သည်ရန်သူ၏တရားစွဲဆိုမှုပြင်ဆင်:
Prause ၏9သည်အခြားသားကောင်များအနေဖြင့်ကျမ်းကျိန်လွှာ,
မှားယွင်းသောနှင့်အသရေရှိသောထုတ်ပြန်ချက်များပါ ၀ င်သည့်တက္ကဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးဘုတ်အဖွဲ့သို့ Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောတိုင်ကြားချက်၊
ဒေါက်တာဟီလ်တန်ထုတ်ဝေခဲ့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂျာနယ် ၂ ခုနှင့် Prause ၏စွပ်စွဲချက်များမှာဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများကိုမဟုတ်မမှန်လုပ်ခြင်းနှင့်ပုံကြီးချဲ့ခြင်းဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။
PDF ၏ Hilton ၏တရားစွဲဆိုမှုအားပြင်ဆင်ချက်များ (စာရွက်စာတမ်းအားလုံးသည်အများပြည်သူမှတ်တမ်းတွင်ရှိသည် - 5: 2019cv00755):
ဒွန်ဟီလ်တန်၏ပြင်ဆင်ချက်တိုင်ကြားချက် (စာတမ်း ၃)
၁ - ပြင်ဆင်ချက်ကိုတိုင်ကြားရန်ခွင့်ယူခြင်း
၂ - တရားလို၏တိုင်ကြားချက်ကိုတင်ပြရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုတရားလိုကပေးအပ်ရန်အမိန့်
၄ - ပြပွဲဟောင်း - Prause နှင့် Hilton မှသာတွေ့ဆုံခြင်းပုံ (၂၀၀၉)
5 - ပြကွက် - နီကိုးလ် Prause နေဖြင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့တက္ကဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့တိုင်ကြားချက်သတိပြုပါ
6 - ပြကွက် - PNAS ထံမှဟီလ်တန်မှအီးမေးလ် (Prause မဟုတ်မမှန်ဟီလ်တန်တစ်ဂျာနယ်ဆောင်းပါးအပေါ်အထောက်အထားများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဟုဆိုကာ)
7 - ပြကွက် - တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာဟီလ်တန်တစ်ဦးဒြေအဖွဲ့ဝင်ကြောင်းအတည်ပြု
8 - ပြပွဲဟောင်း - Don Hilton CV
9 - ပြပွဲဟောင်း - Don Hilton ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းပုံ
10 - ဟောငျးပြပွဲ - သူမက AVN တက်ရောက်ခဲ့သည်အတည်ပြု Prause tweets
12 - John Adler, MD, Cureus ကိုတည်ထောင်သူနှင့်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၁)
၁၃ - YBOP မှဂယ်ရီ Wilson (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၂)
၁၄ - NoFap မှ Alexander Rhodes (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၃)
15 - Staci Sprout, LICSW, CSAT (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၄)
၁၆ - လင်ဒါဟတ်၊ PhD (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၅)
၁၇ - Bradley Green၊ PhD (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၆)
၁၈ - Stephanie Carnes, PhD (ကျမ်းကျိန်လွှာ 18)
၁၉ - ဂျက်ဖ်ဂွတ်ဒ်မန်း၊ ပါရဂူဘွဲ့ (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၈)
၂၀ - ထွက်မြောက်ရာ Laila Haddad (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၉)
Update ကို (သြဂုတ်လ 9၊ 2019): နီကိုးလ် R. ချီးမွမ်း Donald Hilton ၏အသရေဖျက်မှုအားတရားစွဲဆိုမှုအားပယ်ချရန်အဆိုပြုချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည် သူမ၏ဆန့်ကျင်။ Prause ၏အဆိုတွင်မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များစွာနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအထောက်အထားများပါရှိသည်။ Don Hilton သည် ၂၁ မျက်နှာပါသောအတိုက်အခံဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော screenshots များ) နှင့်အထောက်အထားပြပွဲ၏ 57 စာမျက်နှာများ။
Download လုပ်နိုင် PDF ကို - သြဂုတ်လ 9, 2019: သရေဖျက်မှုပယ်ချရန်နီကိုးလ် Prause ရဲ့ရွေ့လျားမှုမှဒွန်ဟီလ်တန်ရဲ့ 21-စာမျက်နှာအတိုက်အခံ se နှုန်း အမှု။
Download လုပ်နိုင် PDF ဖိုင်ရယူရန် - ၂၀၁၀ သြဂုတ် ၉ ရက်၊ ၁၉၉၉ - Don Hilton သည် ၂၁ မျက်နှာပါသော Prause အားငြင်းပယ်ရန်နှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ပြသမှုပေါင်း ၅၇ မျက်နှာပါသောပြပွဲများ၊ ဟီလ်တန်၏ကြေငြာချက်ဖြင့်စတင်သည်။
သူမကကျရှုံးမှုအတွက်စာမျက်နှာ ၈၆ မျက်နှာထပ်ပေါင်းထပ်ဆောင်းခဲ့သည် ပယ်ချဖို့ရွေ့လျားမှု ၎င်းသည်မုသာမှသာမဟုတ် (လိမ်လည်မှုမြောက်များစွာဖြစ်ရပ်များ) ။ YBOP သည်ဤကျယ်ပြန့်သောစာမျက်နှာရှိမုသားအားလုံးကိုဖော်ထုတ်သည် - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ စက်တင်ဘာလ - နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်ဒေးဗစ်လီတို့သည်ဒွန်ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်မမှန်သောသက်သေကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်။
update ကို (နိုဝင်ဘာလ 26, 2019): Donald Hilton ၏အသရေဖျက်မှုအားတရားစွဲဆိုမှုအားပယ်ချရန် Prause ၏အဆိုကိုငြင်းပယ်သည် (တရားစွဲဆိုမှုသည်ရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်) ။
Download လုပ်နိုင် PDF ကို - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် - ဟီလ်တန်တရားစွဲဆိုမှုအားပယ်ဖျက်ရန်အဆိုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
Prause ၏လိမ်လည်မှုနှင့်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများကိုဖော်ထုတ်ထားသောစာမျက်နှာကျယ် Nicole Prause နှင့် David Ley တို့သည်ဟီလ်တန်ကိုအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းတွင် (၁၉၉၉ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၊ စက်တင်ဘာ) တွင်မုသားအတုပြုလုပ်ခဲ့သည်။.
update ကို (ဒီဇင်ဘာလ 26, 2019): Prause ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ဒီဂိမ်းကစားခြင်းအပေါ်ဟီလ်တန်၏အတိုက်အခံ:
Download လုပ်နိုင် PDF ကို - ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် - ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအမိန့်အတွက်တရားခံ၏လှုပ်ရှားမှုကိုဆန့်ကျင်သောတရားလို၏လှုပ်ရှားမှု
အသစ်ပြောင်းသည် (ဆက်လက်) ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့်နာမည်ပြောင် (aliases များ (ဥပမာ @BrainOnPorn) သည်ဟီလ်တန်ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးသူအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုပြီးနောက်
အဆိုပါ Prause ရေခဲတောင်များ၏အစွန်အဖျား
ထိုအစာမကျြနှာ၏ကဏ္ဍများအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ် - စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ3- နီကိုးလ်ပရပ်စ်တွင် Donald Hilton MD ကိုအသရေဖျက်မှုသမိုင်းရှည်ရှိသည်။
2014 Fall: Prause ၏မှတ်တမ်းဂယ်ရီ Wilson နဲ့ Donald L. ဟီလ်တန်ဂျူနီယာ, MD အကြောင်းကိုထုတ်လုပ်သူများရိုက်ကူးဖို့လဲလျောင်း။
ချီးကျူးပြောဆိုခြင်းသည် Mormon Matters Podcast တွင်ပါ ၀ င်သောအဖွဲ့ ၀ င် (၄) ဦး အားအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာများပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်။
Prause မဟုတ်မမှန် Donald ဟီလ်တန်, MD စွပ်စွဲပါတယ်။
မေလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၈ - Ley & Prause သည် Chris Sevier ၏အမှုတွင်ဂယ်ရီ Wilson နှင့် Don Hilton တို့အားသက်သေပြခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်
Don Hilton ၏အခြား Prause ခံရသူ ၉ ဦး ၏ကျမ်းကျိန်လွှာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်သည် Prause ရေခဲစိုင်၏အစမျှသာဖြစ်သည်။ သူမ၏သားကောင်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစာရင်းတွင်သုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ, ကုထုံး, စိတ်ပညာရှင်ဟောင်း UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး, ဗြိတိန်ပရဟိတ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ယောက်ျား, အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသောအစီရင်ခံမှုပုံစံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း PDF).
အခြားသူများကိုနှောင့်ယှက်သူမနိုးနာရီဖြုန်းနေစဉ်, Prause ပါးနစိုက်ပျိုး - သုညသက်သေအထောက်အထားနှင့်အတူ - တစ်ဒဏ္ဍာရီ သူမက "သားကောင်" ခဲ့ porn ရဲ့သက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် porn သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်ပတျဝနျးကငျြသူမ၏အခိုင်အမာသဘောမတူဖို့မလျှောက်ဝံ့တဲ့သူအများဆုံးမည်သူမဆို၏။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများတန်ပြန်ရန်, YBOP Prause ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အနိုင်အထက်ခဲ့သည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုစဉ်းစားပါ။ (ဖြည့်စွက်ဖြစ်စဉ်များကျွန်တော်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားရန်လွတ်လပ်မှုမှာမဟုတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြပါပြီ - ။ Prause ရဲ့သားကောင်များသူတို့ရဲ့အလုပ် / အမြင်များဆန့်ကျင်နောက်ထပ်လက်တုံ့ပြန်မှုကိုကွောကျရှံ့ကဲ့သို့)
ဂယ်လီ Wilson နှင့်အခြားသူများကိုနီကိုး Prause ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှု
ဂယ်လီ Wilson နှင့်အခြားသူများအားနီကိုးလ်ပရာ့စ်၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှု (စာမျက်နှာ ၂)
ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အခြားသူများကို Nicole Prause ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှု (စာမျက်နှာ ၁)
နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ.
Nicole Prause & David Ley သည် Gary Wilson အားတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှမောင်းထုတ်သည်ဟုဆိုသည်
အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု (ပန်းခြံ et al။ , 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း
တက္ကသိုလ် Wisconsin ပြည်နယ်၏ကျောင်းသားသတင်းစာ (The ဘောလုံးရိုက်) ကအပိုဒ်နီကိုးလ် Prause (မတ်လ, 2019) ကမှားယွင်းသောရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာရေးသား
Nicole Prause နှင့် David Ley တို့၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း NoFap မှ Alexander Rhodes အားအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းတို့၏သမိုင်း
Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု
Realyourbrainonporn (ဒံယေလ Burgess, နီကိုးလ် Prause) ဂယ်ရီ Wilson က၏အသရေဖျက်မှု / နှောင့်ယှက်: သူတို့ကအင်တာနက်ကို Wayback မော်ကွန်းတိုက် (သြဂုတ်လ, 2019) တွင်အတုညစ်ညမ်း URLs များကို "ရှာဖွေတွေ့ရှိ"
RealYourBrainOnPorn တွစ်တာများ - ဒယ်နီယယ်ဘာ့ဂ်၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်လိုလားသူမဟာမိတ်များသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံရန်ဘက်လိုက်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကိုဖန်တီးသည် (2019ပြီလ၊ ၂၀၁၉ တွင်စတင်သည်)
porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com") (နီကိုးလ် Prause, မာတီ Klein, Lynn Comella, ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ Ley, အမ်မလီအက်ဖ် Rothman, ရှမွေလသည်ပယ်ရီ, တေလာ Kohut ဝီလျံ Fisher က, ပတေရုဖင်လန်, Janniko Georgiadis, အဲရ Janssen, Aleksandar Štulhofer, ယောရှု Grubbs ဂျိမ်းစ် Cantor မိုက်ကယ် Seto, Justin Lehmiller, ဗစ်တိုးရီးယား Hartmann ဂျူလီယာ Velten, ရော်ဂျာ Libby, Doug Braun-Harvey, ဒါဝိဒ်သည် Hersh, ဂျနီဖာ Valli ။ )
Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူသည် SLAPP စီရင်ချက်တွင်ရှေ့နေစရိတ်များစွာပေးဆပ်ရန်ရှိသည်
ကနေစာမျက်နှာအနည်းငယ်၏ဖန်သားပြင် မူရင်း 17-စာမျက်နှာတိုင်ကြားစာ, သော့ကိုစွပ်စွဲချက်ဖော်ပြ:
အဆိုပါတိုင်ကြားစာများအတွက်ဆက်လက် တစ်ဦးအပိုဆောင်း 12 စာမကျြနှာ။ စာမျက်နှာ ၉-၁၂ တွင်“ Defendant Prause Defamed Dr. Hilton":
ဤအခန်းတွင်စာရွက်စာတမ်းအသစ်များ၏ဖန်သားပြင်များပါရှိသည် ဒွန်ဟီလ်တန်၏ပြင်ဆင်ချက်တိုင်ကြားချက် - ၇/၂၄/၁၉ (မှတ်တမ်းအမှတ် ၃)
အောက်တွင်၏ screenshots များဖြစ်ကြသည် “ ၁ - ပြင်ဆင်ထားသောတိုင်ကြားချက်ကိုတင်ပြရန်ခွင့်ပြုချက်”
၏ screenshots3- ဒွန်ဟီလ်တန်ရဲ့အသစ်ပြင်ဆင်တိုင်ကြားစာကနေသိသိသာသာကွာခြားကြောင်း ဟီလ်တန်၏ကန ဦး တိုင်ကြားချက်:
“ ဖန်သားပြင်5 - ပြကွက် - နီကိုးလ် Prause နေဖြင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့တက္ကဆက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့တိုင်ကြားချက်သတိပြုပါ"
“ ဖန်သားပြင်6 - ပြကွက် - PNAS ထံမှဟီလ်တန်မှအီးမေးလ် (Prause မဟုတ်မမှန်ဟီလ်တန်တစ်ဂျာနယ်ဆောင်းပါးအပေါ်အထောက်အထားများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဟုဆိုကာ)"
"၏ဖန်သားပြင်7 - ပြကွက် - တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာဟီလ်တန်တစ်ဦးဒြေအဖွဲ့ဝင်ကြောင်းအတည်ပြု"
"၏ဖန်သားပြင်10 - ဟောငျးပြပွဲ - သူမက AVN တက်ရောက်ခဲ့သည်အတည်ပြု Prause tweets"
အဆိုပါ9ကျမ်းကျိန်လွှာနောက်ဆက်တွဲအပိုင်းများတွင်တည်ရှိသည်။
ဇူလိုင်လ, 2019: ယော Adler, MD ကျမ်းကျိန်လွှာ: နီကိုးလ် R ကို Prause ဆန့်ကျင် Donald ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု
John Adler ၏ 61 စာမျက်နှာကျမ်းကူးယူမှု၏ PDF - John Adler, MD, Cureus ကိုတည်ထောင်သူနှင့်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၁)
ကျနော်တို့ကျမ်းကျိန်လွှာသာဇာတ်ကြောင်းတစျပိုငျးကို၏ screenshots များ (အပြည့်အဝ PDF ဖိုင်ရယူရန်နေသောပြပွဲသောအဘို့ကိုချန်လှပ်) သည်။
အဆိုပါကျမ်းကျိန်လွှာမြင်၏ကျန်များအတွက် - John Adler, MD, Cureus ကိုတည်ထောင်သူနှင့်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ (ကျမ်းကျိန်လွှာ ၁)။ ယောဟနျသ Adler မှဆက်စပ်သည့် Prause စာမျက်နှာများကဏ္ဍများ:
အခြားသူများ - နို ၀ င်ဘာ၊ ၂၀၁၅: Cureus ဂျာနယ်တည်ထောင်သူ John Adler MD သည် Prause & David Ley နှောင့်ယှက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘလော့ဂ်များ
အခြားသူများက - ဧပြီလ 11, 2018: Prause မဟုတ်မမှန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်မလုပ်ပဲ Cureus လိမ်လည်မှုများတွင်ပါဝင်နေသည်နှင့် (ယောဟန် Adler ၏အယ်ဒီတာမတော်မတရားဖြစ်ပါသည် Cureus)
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဂယ်ရီ Wilson ကကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုချက် - နီကိုးလ် R Prause & Liberos LLC အား Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှု
ဂယ်ရီ Wilson ၏ 47-page ကျမ်းကျိန်လွှာ PDF (၎င်းသည် 470-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာဖြစ်နိုင်သည်) YBOP ၏ဂယ်ရီ Wilson က (ကျမ်းကျိန်လွှာ #2)
ကျနော်တို့ကျမ်းကျိန်လွှာသာဇာတ်ကြောင်းတစျပိုငျးကို၏ screenshots များ (အပြည့်အဝ PDF ဖိုင်ရယူရန်နေသောပြပွဲဝေမျှချန်လှပ်) သည်။
ကျန်တဲ့ကျမ်းကျိန်လွှာကိုဒီမှာတွေ့နိုင်တယ် - YBOP ၏ဂယ်ရီ Wilson က (ကျမ်းကျိန်လွှာ #2). ဤအယူမှားများသည်ဝီလ်ဆင်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊
ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ - Alexander Rhodes ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုချက် - နီကိုးလ် R Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှု။
အလက်ဇန်းဒါး Rhodes ရဲ့ 67-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာ၏ PDF ဖိုင်ရယူရန်: NoFap ၏အလက်ဇန်းဒါး Rhodes (ကျမ်းကျိန်လွှာ #3) ။
ကျနော်တို့ Rhodes ကျမ်းကျိန်လွှာသာဇာတ်ကြောင်းတစျပိုငျးကို၏ screenshots များ (အပြည့်အဝ PDF ဖိုင်ရယူရန်နေသောပြပွဲဝေမျှချန်လှပ်) သည်။
သငျသညျဒီမှာကျမ်းကျိန်လွှာ၏ကျန်တွေ့မြင်နိုင်သည် NoFap ၏အလက်ဇန်းဒါး Rhodes (ကျမ်းကျိန်လွှာ #3)
harrasing ၏ Prause ရဲ့ရှည်လျားသမိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကဏ္ဍများ, NoFap ၏အလက်ဇန်းဒါး Rhodes defaming နှင့် cyberstalking:
အခြားသူများ - ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၆: Prause & David Ley သည် NoFap ကိုတည်ထောင်သူ Alexander Rhodes အားတိုက်ခိုက်သည်
အခြားသူများ - ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၆၊ Pornuse & sock ရုပ်သေးရုပ် PornHelps သည် Alexander Rhodes အားသူသည်လိင်မှုကိစ္စပြfနာများကိုအတုလုပ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည်
အခြားသူများ - ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၆– နီကိုးလ် Prause &“ PornHelps” သည်မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခံရသည် အချိန် မုသာစကားကိုနှင့် misquoting ၏အယ်ဒီတာ Belinda Luscombe
အခြားသူများက - အောက်တိုဘာလ, 2016: Prause Nofap ရဲ့အလက်ဇန်းဒါး Rhodes နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မုသားသက်သေခံမှုကတိပြု
အခြားသူများက - မေလ 24-27, 2018: Prause အဆိုပါ NoFap ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန်မျိုးစုံ SOCKS-ရုပ်သေးဖန်တီး
အခြားသူများ - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ twitter သည်အလက်ဇန္ဒားရော့ဒ်စ်နှင့်နိုဖပ်ကိုတွစ်တာပေါ်တွင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအားဖြင့် "ဖက်ဆစ်" ဆောင်းပါးကိုနောက်ဆက်တွဲဖော်ပြသည်။
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - David Ley & Prause သည်နာဇီကိုထောက်ခံအားပေးသူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဟုပြောဆိုခြင်းအားဖြင့် YBOP / Gary Wilson & Nofap / Alexander Rhodes ကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားနေသည်။
အခြားသူများက - အောက်တိုဘာလ, 2018: သူမ FBI ကဖို့ "အမှတ်စဉ် misogynist" အလက်ဇန်းဒါး Rhodes ကဖော်ပြခဲ့သည်မူကြောင်းကို Prause tweets ။
အခြားသူများ - နို ၀ င်ဘာ၊ ၂၀၁၈: Prause သည်သူမ၏အမှတ်တရမဟုတ်သော NoFap.com နှင့် Alexander Rhodes ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း
အခြားသူများ - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ Prause သည် XFhster နှင့်ပူးပေါင်းပြီး NoFap & Alexander Rhodes; Prause သည်“ ကျွမ်းကျင်သူ” ဖြစ်သည်။
အခြားသူများက - ဒီဇင်ဘာလ 2018: FBI ကနီကိုးလ် Prause အလက်ဇန္ဒား Rhodes အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု။
Update ကို (အောက်တိုဘာ၊ 2019) - အောက်တိုဘာလတွင် 23, 2019 Alexander Rhodes (တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ) reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC. အကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း။ Rhodes မှတင်သွင်းသောမူလတန်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု (ကြည့်ရှု ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးစာမျက်နှာ).
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ Staci Sprout၊ LICSW ကျမ်းကျိန်လွှာ - နီကိုးလ် R Prause & Liberos LLC အား Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
Staci အညွှန့်၏ 21-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာ၏ PDF: Stacy အညွှန့်, LICSW, CSAT (ကျမ်းကျိန်လွှာ #4) ။
ပို 21-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာကိုတွေ့မြင်များအတွက်: Stacy အညွှန့်, LICSW, CSAT (ကျမ်းကျိန်လွှာ #4) ။
အဆိုပါ Stacy ညှနျ့ကျမ်းကျိန်လွှာနှင့်ဆက်စပ်သောကဏ္ဍများ:
အခြားသူများက - နွေရာသီ 2014: Prause ပြည်နယ်ပျဉ်ပြားမှလိင်စွဲကုသအစီရင်ခံရန်လူနာအားတိုက်တွန်းလိုက်သည်။
အခြားသူများက - အောက်တိုဘာလ, 2016: Prause မဟုတ်မမှန်က "ခါးပန်းနှင့် IITAP ကဤသို့ဆို၏ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ယောဂီပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသိပ္ပံပညာရှင်များမှလိင်အရအခွင့်အရေးနဲ့ချေမှုန်းရေးဖြစ်ကြောင်း"
အခြားသူများ - ဇန်န ၀ ါရီလ ၂၄ ရက် ၂၀၁၈ - Prause သည်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်သို့ကုသသူ Staci Sprout နှင့် (အသရေဖျက်မှုနှင့်အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်းဆိုင်ရာအခြားအဖြစ်အပျက်များ) နှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်လုံသောတိုင်ကြားမှုများကိုတင်ပြသည်
မေလ, 2019: အဆိုပါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နီကိုးလ် Prause ရဲ့မြောက်မြားစွာ ICD-11 မှတ်ချက် ( "ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အရည်အချင်းမရှိတစ်ပဋိပက္ခ၏စွပ်စွဲချက်အဖြစ်ရန်မှတ်ချက်များ,") ဖော်ပြတဲ့စက္ကူထုတ်ဝေ
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ လင်ဒါဟက်ချ်၊ ပါရဂူဘွဲ့မှတ်တမ်း - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC အား Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
Linda Hatch ၏ 3-စာမျက်နှာကျမ်းကူးယူမှု၏ PDF: Linda Hatch, Ph.D (ကျမ်းကျိန်လွှာ #5)
Prause သည် Linda Hatch အားအန္တရာယ်ရှိသောအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာတစ်စောင်ကိုလည်းပေးပို့ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် - ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - အတုအယောင်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာများနှင့်လူများအားတိတ်ဆိတ်စွာချီးမွမ်းပါ
ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ Bradley Green၊ PhD ကျမ်းကျိန်လွှာ - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
Bradley အစိမ်းရောင်ပါရဂူဘွဲ့ 39-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာ၏ PDF ဖိုင်ရယူရန်: Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D (ကျမ်းကျိန်လွှာ #6)
ပို 39-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာကိုတွေ့မြင်များအတွက်: Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D (ကျမ်းကျိန်လွှာ #6)
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ Stefanie Carnes၊ Ph.D ကျမ်းကျိန်လွှာ: နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
Stefanie Carnes 12-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာ၏ PDF ဖိုင်ရယူရန်: Stephanie Carnes, Ph.D (ကျမ်းကျိန်လွှာ #7)
ပို 12-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာကိုတွေ့မြင်များအတွက်: Stephanie Carnes, Ph.D (ကျမ်းကျိန်လွှာ #7)
အဆိုပါ Stefanie Carnes ကျမ်းကျိန်လွှာနှင့်ဆက်စပ်သောကဏ္ဍများ:
နွေရာသီ 2014: Prause ပြည်နယ်ပျဉ်ပြားမှလိင်စွဲကုသအစီရင်ခံရန်လူနာအားတိုက်တွန်းလိုက်သည်။
၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၆ - လိင်စွဲလမ်းမှုကိုကုသသည့်ကုထုံးကိုလိင်စွဲလမ်းသူအားမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ, 2016: Prause မဟုတ်မမှန်က "ခါးပန်းနှင့် IITAP ကဤသို့ဆို၏ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ယောဂီပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသိပ္ပံပညာရှင်များမှလိင်အရအခွင့်အရေးနဲ့ချေမှုန်းရေးဖြစ်ကြောင်း"
ဇန်နဝါရီလ, 2019: Prause မဟုတ်မမှန်ပြောင်းလဲခြင်း (ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း) ကုထုံးကျင့်သုံး၏လိင်တူချစ်သူ IITAP ကုထုံးစွပ်စွဲပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ၂၀၁၈ - ဝါဆိုဝါးတားပြည်နယ်မှကုထုံး Staci Sprout နှင့် (အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုများအပါအ ၀ င်) အားအကြောင်းမဲ့တိုင်ကြားမှုများကိုချီးမွမ်းသည်။
ဧပြီလ 2019: Prause ကုထုံး DJ သမား Burr harasses နှင့်ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ဂျက်ဖ်ဂွတ်ဒ်မန်း၊ ပါရဂူဘွဲ့မှတ်တမ်း - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
Geoff Goodman, Ph.D 3-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာ၏ PDF ဖိုင်ရယူရန်: Geoff Goodman, Ph.D (ကျမ်းကျိန်လွှာ #8)
Geoff Goodman ၏ 3-စာမျက်နှာကျမ်းကူးယူမှု၏ PDF: Geoff Goodman, Ph.D (ကျမ်းကျိန်လွှာ #8)
Goodman ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အပြင် Prause Goodman တိုက်ခိုက်ခဲ့ သူမနှင့် David Ley ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောမှတ်ချက်များအပိုင်းပါရှိသည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် blog post::
ထုံးစံအတိုင်း Prause သည်လိမ်နေသည် - Geoff Goodman သည် AASECT listserve တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးသူနှစ်သက်ရာတိုင်းတင်နေသည်။ သူ၏တက္ကသိုလ်သည်နောက်ဆုံးတွင် Prause ၏ minions တစ်ခုအားစိန်ခေါ်မှုအတွက် Goodman အားအပြစ်ပေးရန် Prause ၏မကောင်းသောကြိုးပမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ Laila Haddad ကျမ်းကျိန်လွှာ - နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ကို Donald Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း။
Laila ၏6စာမျက်နှာကျမ်းကူးယူမှု၏ PDF: ထှကျမွောကျရာ Cry ၏ Laila Haddad (ကျမ်းကျိန်လွှာ #9)
အဆိုပါ 6-စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာ၏ကျန်ရှိသောအဘို့အတွေ့: ထှကျမွောကျရာ Cry ၏ Laila Haddad (ကျမ်းကျိန်လွှာ #9)
ဒီကျမ်းကျိန်လွှာမှဆက်စပ်ပုဒ်မ: ဖေဖော်ဝါရီလ 2019: Prause မဟုတ်မမှန်လိမ်လည်မှုထှကျမွောကျရာ Cry စွပ်စွဲပါတယ်။ CEO ဖြစ်သူရဲ့ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုတည်းဖြတ်ရန်တွေ့မြင်, (spurious အကြောင်းပြချက်များအတွက်) သည်မစ်ဆူရီရှေ့နေချုပ်မှ non-အမြတ်အစီရင်ခံရန် twitter နောက်လိုက်ကမေးတယ်။
ဤအပိုင်းသည် Prause နှင့်သူမ၏ယူဆရသောနာမည်ပြောင်များ၏တိုက်ခိုက်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။@BrainOnPorn, အမှန်တရား ShallSetYouFreeဟီလ်တန်ပေါ်မှာ ပြီးနောက် မိမိအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုတင်သွင်းခဲ့သည်။ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများတွင်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ရှေ့နေများကအများအားဖြင့်အမှုသည်များအားအမှုများကိုဆွေးနွေးခြင်းမပြုရန်ညွှန်ကြားသည်။ အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရသူတစ် ဦး သည်နောက်ထပ်အသရေဖျက်မှုနှင့်ပစ်မှတ်ထားသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်ဟုပြောစရာမလိုပါ။ နီကိုးလ်ပrauseသည်သာမန်တရားခံသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်သူမဟုတ်ပါ။ မဆင်မခြင်ထက်ပိုသောအောက်ပါပစ္စည်းများသည်ဟီလ်တန်နှင့် ပတ်သက်၍ Prause ၏ငြိုးထားမှုကိုပြသသည်။
ဇွန်လ 3, 2019: David Ley နှင့် Prause alias (RealYBOP) တို့ပါဝင်သည် ဟီလ်တန်ကို Rory Reid ၏ထင်သာမြင်သာမရှိသောဝေဖန်ချက်ဖြင့်ရှုတ်ချသည်။
ဇြန္လ 22, 2019: Prause ၏အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သော David Ley က Hilton အကြောင်းတွစ်တာရေးသားခဲ့သည်။ မှတ်ချက်။ (၁) David Ley သည်ဤကိစ္စတွင် Prause ကိုယ်စားလိမ်လည်ထားသောကျမ်းကျိန်လွှာတင်သွင်းခဲ့သည်။ (၂) PornHub သည် Ley ၏တွစ်တာကိုပထမဆုံးပြန်လည်ရေးသားခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 5, 2019: David Ley ၏ tweet သည်အသရေဖျက်မှုကိုယ်နှိုက်နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။
ဇူလိုင်လ 15, 2019: သူမသည် Hilton ကိုနာမည်ဖြင့်မပြောသော်လည်း Prause သည် Hilton နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်အတိုင်းထပ်တူရေးသားခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ 13, 2019: Prause / RealYBOP ၏မဟာမိတ်သည်ဟီလ်တန်အားမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များဖြင့်ဂုဏ်တင်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 20, 2019: သူမ၏အမှု၌အလွန်အရေးကြီးသောကြားနာ၏နေ့၌, ဝတ်စုံအတွက်အဓိကပြissueနာနှင့်ပတ်သက်။ Tweets: Kinsey သည်ကျော်ကြားသောစာချုပ်၌ဖော်ပြထားသော pedophiles နှင့်ပူးပေါင်းသည် လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (1948)။ ၎င်းသည် Prause နှင့် Hilton တို့၏တစ်ခုတည်းသောစကားဝိုင်းတွင်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Hilton ခေါ်ဆိုမှုအဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းကမှားယွင်းဖော်ပြသည် ဒီမှာ ကလေးတစ် ဦး molester (သူလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှ) ။
နိုဝင်ဘာလ 14, 2019: တိုက်ရိုက်ဟီလ်တန်နှင့်တရားစွဲဆိုမှုကိုရည်ညွှန်းသည့် tweets သုံးခု (1 tweet,2tweet,3tweet) နှင့်မှားယွင်းသောသို့မဟုတ်အသရေဖျက်မှုဖော်ပြချက်များပါသော
နိုဝင်ဘာလ 14, 2019: ထိုနေ့တွင်ပင် Prause alias ကို @BrainOnPorn တွစ်တာ CBS တွင်ဟီလ်တန်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အကြောင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍
နိုဝင်ဘာလ 19, 2019: RealYBOP သည်ဒေါက်တာဟီလ်တန်၊ (သူသည် CBS အပိုင်း၌“ ဘာသာရေးသမား” ဟုခေါ်သည်။ သို့သော်သူသည်သိပ္ပံပညာကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့ပြီးဘာသာရေးဘာသာရေးကိုသူ၏လူထုဟောပြောချက်များတွင်မည်သည့်အခါမျှမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ သူ၏ဝေဖန်သူများသာပြုကြသည်.)
နိုဝင်ဘာလ 22, 2019: UCLA ဥပဒေအကြောင်းတွစ်တာ Diana Davison ဆောင်းပါး Hilton နှင့် Rhodes တရားစွဲဆိုမှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ အထူးသ Volokh ရဲ့ဖော်ပြသည် Hilton v ။ Prause အကြောင်းကိုဇူလိုင်လဆောင်းပါး။ ချီးမွမ်းခြင်းသည် UCLA ၏ဥပဒေကိုချက်ချင်းခြိမ်းခြောက်နေသည်!
နိုဝင်ဘာလ 24, 2019: Diana Davison သည် Prause အား porn ဆုများတက်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ညာနေသည်ဟုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် Prause က Don Hilton နှင့်ပတ်သက်သော Chad Sokol အီးမေးလ်ကို Tweet လုပ်ခဲ့သည်
Chad Sokol & ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် Gonzaga တက္ကသိုလ်တွင်ကျင်းပသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ညီလာခံအကြောင်းသတင်းထောက် Chad Sokol နှင့်သူ၏ဘက်လိုက်သည့်ဆောင်းပါးကိုဖော်ပြသည်။ (ဥပမာ Hil Hilton ကဲ့သို့သော) တင်ပြသူအချို့နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် Sokol သည် David Ley၊ Nicole Prause (နှင့် Prause တွဲဖက်စာရေးဆရာ Cameron Staley) တို့နှင့်စကားပြောဆိုခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်။ Sokol သည် Prause-based ပစ္စည်းများနှင့်စကားပြောသောနေရာများနှင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမှာဘက်လိုက်မှုရှိသည်။
Hilton နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရာတွင် Sokol က Prause ကိုဟယ်လ်တန်၏ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကသူ၏အမြင်များကိုလွဲမှားစေပြီးဘက်လိုက်စေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဘက်လိုက်မှု (သုတေသနမဟုတ်ပါ) သည် Sokol ၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ခဲ့လျှင် Sokol သည် Prause နှင့် Ley တို့၏ဘက်လိုက်မှုအထောက်အထားများကိုဆန်းစစ်ရန်ဆန္ဒရှိကောင်းရှိနိုင်မည်ဟုဟီလ်တန်ကသိချင်ခဲ့သည်။
Chad Sokol က“ ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုမျိုး” ဟုပြောသောအခါသူကရည်ညွှန်းသည် ကျွန်တော့်အီးမေးလ် Don Hilton ကို, Prause ကပေးပို့သူ Chad Sokol မှပေးပို့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ရှိအရာအားလုံးသည်မှန်ကန်ပြီးတိကျမှန်ကန်သည် Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆုပြပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်.
ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2019: Prause သည်မအောင်မြင်သောစက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုမှထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွင်သူတင်ပြခဲ့သောအသရေဖျက်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ၏ PDF များနှင့်လင့်ခ်များကိုတွစ်တာပို့ခဲ့သည်။ သူမသည်သူတို့ကိုရှိခဲ့ပါတယ် www.reason.com အပေါ် re- ထုတ်ဝေခဲ့သည်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် သူမ tweets တွေပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့ Motion to Dismiss ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့်သူမဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ သူမ၏ရှုံးနိမ့်မှုကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားရန်သူမကြိုးပမ်းနေသည့်တွစ်တာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတွစ်တာအကောင့်အတုများကို retweet လုပ်ရန်နှင့်သူမ၏ tweet ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ (!)
Prause ၏တွစ်တာသည်တစ်ချိန်တည်းတွင် retweets ၁၀၀ ကျော်ခဲ့သည်။အခု ၇၀ အထိရောက်နေပြီ) ။ အားလုံးနီးပါးအကောင့်အတုခဲ့ကြသည်။ ဒီအခိုင်အမာကိုထောက်ခံတဲ့ဖန်သားပြင်အနည်းငယ် -
ဂိမ်း ထုတ်ရန်လှုပ်ရှားမှု များသောအားဖြင့်ကျွန်တော့်ကိုအဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၊ ဒွန်ဟီလ်တန်၊ သူမသည်တစ်လျှောက်လုံးသူ့ကိုယ်သူမတရား။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသူမ၏တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရန်သူမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဟီလ်တန်နှင့်အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်စ်အပါအ ၀ င်သူမပစ်မှတ်များကို ထပ်မံ၍ အသရေဖျက်မှုနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ဥပဒေကြောင်းအရသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 21, 2019: Prause နောက်တစ်ကြိမ် tweets သူမ၏အသရေဖျက်မှု၊ ငြင်းပယ်ပြီးသားတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများကိုထုတ်ပယ်ခြင်း
Pascal Gobry ၏ဆောင်းပါးတွင်သူ၏ဆောင်းပါးကိုတွစ်တာတွင်တင်ခဲ့သည်။ Porn ကူးစက်မှုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်သိပ္ပံနည်းကျအခြေပြုသည့်အမှု။ RealYBOP နှင့်နီကိုးလ်ပရာ့စ်တို့က Gobry's Thread တွင်တွစ်တာပေါင်း ၉၀ ဖြင့်တုန့်ပြန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြော်ငြာ hominemနှင့်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက် (ပေမယ့် မိမိအဆောင်းပါး၏ပစ္စည်းဥစ္စာ addressing ဘယ်တော့မှမ).
ဒီဇင်ဘာလ 19, 2019: အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များတွင် Prause သည် Don Hilton ကိုတိုက်ခိုက်နေသော YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတင်ခဲ့သည်။Donald ဟီလ်တန် Bigotry။ " ၅ မိနစ်လောက်ကြာအောင်အတူတကွစုစည်းထားသည့်အရာများ။ ဗီဒီယို၏ကောင်းသောအပိုင်းမှာ Hilton သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခြင်းဖြစ်သည် တစ်စုံတစ် ဦး က။ Prause သည်ကြည့်ရှုသူများကိုသူတို့ Hilton ၏စကားများဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်စေရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါ။
၎င်းကိုအသစ်တီထွင်ထားသည့်ယူကျု့ချန်နယ်တွင်တင်ထားသည်။အမှန်တရား ShallSetYouFree။ " ၎င်းသည် Prause ၏ YouTube channel ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် (၁) ၎င်းကို "RealYourBrainOnPorn" တည်ရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်း (၂) တွင်အောက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ရေဗက္ကာ Watson ကဗီဒီယို outing Prause ကိုအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်သူအဖြစ် (၃) မှတ်ချက်သည် Prause ပြောခြင်းဖြစ်သည် ပထမလူ ကယ်လီဖိုးနီးယားစိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့၏တိုင်တန်းချက်များနှင့် WIPO တိုင်ကြားချက် (သူနှင့်ပါ ၀ င်ခြင်း) အကြောင်း။ သူမပျက်ကွက်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်အား“ Real YourBrainOnPorn” (Prause မတိုင်မီ YouTube ရုပ်သံလိုင်း၏အမည်ကို“ သို့မပြောင်းမီ” အမည်ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည့်အပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ )အမှန်တရားကိုသင်တို့လွတ်မြောက်ရလိမ့်မည်” \_ t):
အခြားသူများကမူအမှန်တရားကိုသင်တို့လွတ်မြောက်ရလိမ့်မည်” \_ t ချီးမွမ်းစကားများ alias အဖြစ်
အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Prause သို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်စားလှယ်သည် Bosmol အတွက်အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းခဲ့သည် လှည့်ဖြားနေသော Hilton ဗွီဒီယိုကိုတွစ်တာနှင့်ဖြန့်ဝေသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၉ မှ tweet တစ်ခု။
အဘယ်ကြောင့် Neurosurgery Donald Hilton, MD မှဆရာ ၀ န်သည်သူ၏လူသိရှင်ကြားဟောပြောချက်တွင်“ သဘာဝလက်ထပ်ခြင်း” နှင့်မရောနှောနိုင်သည့် transm တစ် ဦး ချင်းစီကို“ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း”“ hermaphroditic hybrids” ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်https://t.co/IMWWUCXHvv@DeanKaulfus @TXCivilRights @thedailytexan
မ @UTHealthSA သူတို့ကိုကျောင်းဝင်းထဲမှာချင်တယ်မဟုတ်လား
- Bosmol (@bosmol) ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2019
Bosmol သည်တက္ကဆက်တက္ကသိုလ် (ဟီလ်တန်သင်ကြားသောနေရာ)၊ UT Dean၊ တက္ကဆက်ပြည်သူ့အခွင့်အရေးစီမံကိန်းနှင့် The Daily Texan တို့ကို tag လုပ်သည်။ ဒီ Prause ဟာတက္ကဆက်တက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားရေးရာထူးမှဟီလ်တန်ကိုအလုပ်မှထုတ်ပစ်ရန်ထပ်မံကြိုးစားနေပါသလား။ မည်သူမဆို“ ငြင်းနိုင်သောမကောင်းသောအကျင့်” ကိုပြောနိုင်ပါသလား။
Bosmol ရဲ့တွစ်တာကိုနှစ်စောင်ပြန်ရေးပေးတာကြောင့်ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် RealYourBrainOnPorn“ ကျွမ်းကျင်သူများ” နှင့် Prause မဟာမိတ်များနှင့်နီးစပ်သူ David Ley နှင့် Victoria Hartmann
Bosmol တွစ်တာကို Prause ၏ Twitter alias @BrainOnPorn မှလည်းကြိုက်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2019: RealYBOP သည် ၁၀ နှစ်သက်တမ်းရှိ Don Hilton ၏ထင်မြင်ချက်ကိုဘယ်သောအခါမှမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ Hilton & Watts မှတ်ချက် ညစ်ညမ်းစွဲမြား: A မှ neuroscience ရှုထောင့်
ဒီဇင်ဘာလ 31, 2019: နှစ်သစ်ကူးအကြိုတွင် RealYBOP ကိုပိတ်ဆို့ထားသည့် Gabe Deem သည် RealYBOP ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားဖျက်သိမ်းခြင်းစာရွက်စာတမ်းများမှအသရေဖျက်မှုနှင့် PDF များကိုတွစ်တာတွင်တင်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2019: RealYBOP သည် Gary Wilson လက်အောက်တွင် trolls (ကျွန်ုပ်သည်သူမကိုပိတ်ဆို့ထားသော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း)၊ Hilton & Watts၊ ၂၀၁၁ အကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲ - နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း
ဒီဇင်ဘာလ 31, 2019: အမှန်တကယ်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ၊ တွစ်တာ @BrainOnPorn (ပုံရသည် Prause ကိုစီမံခန့်ခွဲသည်) သည် Rory Reid ၏ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြရန်၎င်း၏ပင်မစာမျက်နှာကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် Hilton & Watts, 2011:
ဖေဖော်ဝါရီလ 29, 2020: Prause & Luke Adams သည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာတရားစွဲဆိုမှုများကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းသည်တရား ၀ င်အရေးယူမှုများနှင့်အတုအယောင် C&D အက္ခရာများ၏အာဏာရrulingကရာဇ်ဖြစ်သည်။
မတ်လ 4, 2020ဖြေ။ Ley က Prause ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ screenshots တွေကို tweets (Ley ကဒီ screenshots တွေကိုဖမ်းပြီးသိမ်းဆည်းထားတာမရှိပါဘူး) ။ ငါ Hilton ၏ရှေ့နေများက Ley နှင့် Prause အီးမေးလ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ Prause သည် screenshots များထောက်ပံ့ပေးပြီး tweet ၏ content ကိုအကြံပြုသည်။
Prause alias အကောင့် RealYBOP သည် Ley ၏တွစ်တာကိုကြိုက်ခဲ့သည်
မတ်လ 5, 2020: သူမအပေါ်အသရေဖျက်မှု ၂ ခုကိုအရေးယူခြင်းသည်အဆင်ပြေသောလမ်းကြောင်းသို့ရွေ့နေသည်။
မတ်လ 7, 2020သူမကအခြားလူတစ်ယောက်ကိုအသရေဖျက်မှုနဲ့ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ပြီးတော့သူမကတရားစွဲဆိုမှုအမျိုးမျိုးကို“ အနိုင်ရ” တယ်ဆိုပြီးမှားယွင်းစွာပြောခဲ့တယ်။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်သူမအပေါ်အသရေဖျက်မှု ၂ ခုသည်တစ်ခုတည်းသောအမှန်တကယ်တရားစွဲဆိုမှုများဖြစ်သည်။
Prause ၏လိမ်လည်မှုနှင့်လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများကိုဖော်ထုတ်ထားသောစာမျက်နှာကျယ် နီကိုးလ်ပရူးနှင့်ဒေးဗစ်လေတို့သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင် (မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်း) (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၉၉).
ဇြန္လ 4, 2020: Don Hilton တင်ပြချက်မှကောက်နုတ်ချက်ကိုကောက်ယူပြီး NCOSE ကိုလိုက်နာရန် - Prause သည်။Donald L. Hilton Jr. သည် MD နှင့် Pornography တို့၏ ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်းလူငယ်များနှင့်မိဘများကိုပြောပြသည်။ တနည်းကား, Prause ဒေါက်တာ Hilton (သူမဒွန်သူမ၏နောက်ယောင်ခံခဲ့သည်ဟုမဟုတ်မမှန်) မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုသူကို "မကြောက်" ကြောင်းထုတ်ဖော်အဖြစ်ထပ်မံဤသည်အရေးကြီးပါသည် တကယ်တော့သူမကဟီလ်တန်ကိုဆက်ပြီးလိုက်နေတဲ့အတွက်သူဟာအငြင်းပွားစရာဖြစ်နေတယ်၊ ​​သူကသူ့ကိုအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခံရရင်တောင်
ဇူလိုင်လ 23, 2020: အဆိုပါ7များအတွက်th တနေ့တနေ့၊ RealYBOP သည် Gabe Deem tweet တစ်ခုကို screenshots လုပ်သည်သူ့ကိုရှုတ်ချဂုဏ်ဖျက်ခြင်း၊ ဤအချိန်တွင်သူသည် Don Hilton ကိုလိုက်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက် - တရားသူကြီးတွေအတွက်တော့ကြည့်ကောင်းမှာပါ။ Gabe ကဟီလ်တန်ကိုအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်လို့မပြောခဲ့ပါဘူး။
တစ်ခုမှာ "နီကိုးလ် Prause ဆန့်ကျင် Donald ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု: Download လုပ်နိုင် PDF ကိုဟီလ်တန်တရားစွဲဆိုမှုများရဲ့ပြပွဲနှင့်9သည်အခြား Prause သားကောင်များအားဖြင့်ကျမ်းကျိန်လွှာ"
Pingback: porn စွဲလမ်းမှုကိုဖုံးကွယ်ရန်နည်းဗျူဟာများ Liz Walker ကလက်ဆောင်
သုတေသနအသစ်⬇️⬇️⬇️⬇️သုတေသီများကောက်ချက်ချသည်မှာ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြသနာများသည်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ t.co/7WHGhUowfK
ဖြေဆိုသူလူငယ် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းကသာ၎င်းတို့သည်နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပျမ်းမျှအပန်းဖြေမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ t.co/T35ShtF1d7